काठमाडौं। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने फागुन आज (मंगलवार) अन्तिम दिन रहेको छ। माघ ३० गते शुक्रवारदेखि आईपीओ विक्री खुला गरेको यस कम्पनीले आईपीओमा सोमवारसम्म मागभन्दा करीब ५० गुणा बढी आवेदन परिसकेको छ।
आईपीओ विक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङका अनुसार सोमवार साझ ५ बजेसम्म १२ लाख १ हजार ८९० जनाबाट १ करोड ८५ लाख ३५ हजार १०० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ। जुन मागभन्दा ४९ दशमलव ४२ गुणा बढी हुन आउँछ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० अंकित दरको ४ लाख कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणमा विक्रीमा ल्याएको हो। कुल कित्तामध्य शून्य दशमलव ५ प्रतिशत दरको ५ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि र ५ प्रतिशत दरको २० हजार कित्ता सामूहिक लगानीकोषलाई सुरक्षित राखी बाँकी ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर सार्वजनिक निष्कासनमा ल्याएको हो।
उक्त आईपीओमा आवेदन दिँदा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म दिन सकिने व्यवस्था छ। विक्री प्रबन्धकसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र तीनका शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
साथै, मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर मोवाइल एपबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिमको संकेत गर्ने इक्राएनपी इस्यूर रेटिङ डबल बी प्रदान गरेको छ।
बैंक अफ काठमाण्डूले विशेष साधारण सभा डाक्यो, यस्ता छन् एजेण्डा
सुनको मूल्य बढ्यो, ताेलामा कति पुग्यो ?
नेकपाको सचिवालय बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
फागुन २३ गते संसद बैठक बोलाउने सरकारको निर्णय